KudoZ™ Iskuxirnaanta kaalmaa turjumaada
KudoZ™ waxay isticmaalayaasha ProZ.com ugu deeqdaa hab ay isu siiyaan, iyo martidooda caawimaad bilaash ah ee turjumaada eray bixinta adadag.
Dhib miyaad ku qabtaa eray bixinta adadag? Ku soo dheji su'aalaha KudoZ
Wixii caawimaad ah turjumaada eray bixinta ama odhaahda gaagaaban, ku soo dheji su'aalaha KudoZ kuna deeq nuxurka, luuqada la bartilmaansanayo ee loo baahan yahay, iyo macluumaadka kale ee loo xulan karo. Kadib markaad soo dhejiso su'aashaada, isticmaalayaasha ProZ.com waxay soo jeedin doonaan turjumaadyo tafaasiil la jira, iyo mararka qaar tixraacyo.
Jawaabaha sug, dooro jawaabta ugu waxtarka badan
Su'aasha iyo jawaabta la doortay ayaa la kaydinayaa
Su'aasha iyo turjumaada lagu taliyey ayaa lagu keydinayaa intaa kadibna waxaa heli kara qofkasta.